သိပ္ပံပညာရှင်စတီဖင်ဟော့ကင်းနှင့်အင်တာဗျူး | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Stephen Hawking နှင့် Sue တို့သည် 1992 ခုနှစ်က အင်တာဗျူးခဲ့ဖူးသည်။ ယခု (၂၃)နှစ် အကြာ ၄င်းတို့သည် ဒုတိယအကြိမ် အင်တာဗျူးကြသည်။ ပထမအကြိမ် အင်တာဗျူးတုန်းကလည်း အောင်မြင်သည်။ သို့သော် ယခုလောက် မညက်ညောဟု သုံးသပ်လျှင် သုံးသပ်နိုင်သည်။ ပထမအကြိမ်က ထောင့်တတောင့်တောင့်များ ရှိသည်၊ မညက်ညောချေ – ယခုတစ်ခါ ညက်ညောသည်။
Sue: ဆရာကြီးအဖေက ပညာတတ်ကြီးပဲ သချာင်္တွေဘာတွေ ဆရာ့ကို သင်မပေးဘူးလား
Hawking: သင်ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ထက် ပိုတတ်သွားတယ်ဆိုတာ သိတော့မှပဲ ရပ်သွားပါတယ်။
ထိုအမေးအဖြေများကို ပရိသတ် တော်တော်များများ နှစ်ခြိုက်ကြသည်။ တစ်နေရာတွင်လည်း
Sue: ဆရာကြီးကို ခေါင်းမာတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ဆရာကြီး သူငယ်ချင်တွေကရော မိသားစုကရောပေါ့နော် – ဆရာကြီးက ခေါင်းမာပါသလား။
Hawking: ကျွန်တော်က (Stubborn) ခေါ်တဲ့ ခေါင်းမာတာ မဟုတ်ဘူး၊ (Firm Determined) ခေါ်တဲ့ ခိုင်မာအတဲ့ အသိနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ပြဌာန်းမှုရှိတာ။ အဲဒီလိုခိုင်မာမှု မရှိရင် ကျွန်တော့်ကို အခုလိုတောင် ဂရုတစိုက် အမေးခံရမှာ မဟုတ်ဘူး —
ထိုအမေးအဖြေများကို ပရိသတ် နှစ်ခြိုက်ကြသည်။
ယခုအခါတော့မူ အမေးတစ်ခွန်း အဖြေတစ်ခွန်း သဘောထက် ဟော့ကင်းကို ဘလက်ဟိုးလ် အကြောင်း ပြောခွင့်ပြုသည်က ပိုများသည်။
(…many of the properties of the objects which collapsed stars become, that is, black holes.)
ဟော့ကင်းသည် ဘလက်ဟိုးလ် အကြောင်း ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ကြယ်သေရာမှ ဘလက်ဟိုလ်း ဖြစ်လာသည်ဟု ရှင်းပြသည်။
(Albert Einstein even wroteapaper in 1939, claiming stars could not collapse under gravity, because matter could not be compressed beyondacertain point. Many scientists shared Einstein’s gut feeling.)
အိုင်းစတိုင်းက ကြယ်များ သေဆုံးချုပ်ငြိမ်းခြင်း ဖြစ်နိုင်စရာမရှိဘူး ဟူသောသဘော ပြောခဲ့ဖူးသည်။ ယင်းအယူအဆနောက်ကို သိပ္ပံပညာရှင် တော်တော်များများ လိုက်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဘလက်ဟိုးလ် ပေါ်လာသောအခါ လက်ခံဖို့ နှေးကွေးနေသည်။ သို့သော် ဘလက်ဟိုးလ်မှာ အမှန်တကယ် တည်ရှိနေကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးရပါသည်။
(It is said that fact is sometimes stranger than fiction, and nowhere is that more true than in the case of black holes. Black holes are stranger than anything dreamed up by science fiction writers,..)
ဟော့ကင်း ပြောပြချက်အရ သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ် အာကာသ ရုပ်ရှင်များထက် ပို၍ အမှန်တရားက ပို၍ စိတ်ဝင်စားကြောင်း ဘလက်ဟိုးလ်ကို နမူနာပြကာ ပြောပြဖြေရင်းရှာသည်။
ပထမပိုင်းကမူ Sue ကဆရာကြီး ဘလက်ဟိုးလ်ကို စိတ်ဝင်စားလျှင် ဘလက်ဟိုးလ်ထဲ ခုန်မချဘူးလားဟု မေးသောအခါ –
Hawking: ကျွန်တော်က ဘလက်ဟိုးထဲကို ခုန်ချဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘက်လက်ဟိုးလ်ထဲမှာ ဘယ်အရာတွေ ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိချင်တာပါ၊ စိတ်ဝင်စားတာပါ —
ဘလက်ဟိုးသည် အာကာသထဲ၌ အမှန်တကယ် တည်ရှိကြောင်းနှင့် ဟော့ကင်းသည် ဘလက်ဟိုးလ်ကို အထူးပြု လေ့လာသဖြင့် သူသည် ဘလက်ဟိုးလ်နှင့် ပတ်သက်၍ အထူးနာမည် ရကြောင်း ထင်ရှားသည်။ (John Wheeler) ဆိုသော ပုဂ္ဂိုလ် ဘလက်ဟိုးလ်နှင့် ပတ်သက်၍ ထင်ရှားပါသည်။ သို့သော် ဟော့ကင်းကမူ အသေးစိပ် အတွင်းကျကျ လေ့လာသဖြင့် ပိုမို၍ ထင်ရှားကြောင်း ဤအင်တာဗျူးတွင် မှတ်တမ်းသဖွယ် ရရှိနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည်။
Tags: Black Holes, Buddhism and Science, စတီဖင်ဟော့ကင်း
This entry was posted in Buddhism & Science and tagged Black Holes, Buddhism and Science, စတီဖင်ဟော့ကင်း. Bookmark the permalink.